Shamarree ogeettii damee hedduu - BBC News Afaan Oromoo
Shamarree ogeettii damee hedduu
2 Amajjii 2018
Image copyright Rahel Buluts
Goodayyaa suuraa Ogbarruu walaloo 'Qaatanyaa'
Shamarreedha intalli. Harka pirezidaantii biyyattii kan duraa irraayis medaaliyaa 'dargaggeettii goota misoomaa' jedhu fudhattee jirti. Shamarreen tunis dameewwan akka ogbarruu, hojii harkaa fi fakkii irratti hirmaachuun kan gahee ishee gumaataa jirti.
Baatiin Muddee ALI bara 2007, erga intalli tun gaalarii kana magaalaa guddoo naannichaa maqaleetti saaqxee waggoota sadii lakkofsiiseera. Kunis dagaggootaaf lafa yeroo itti dabarfataniifi itti mari'atan ta'aaf jira.
Kana malees waltajiin kun sadarkaa hojiiwwan walaloo fi asoosama gagabaaboo dagaggoon biraa barreessan maxxansuu irra gaheera.
Hojiiwwan fakkii fi hojii harkaa Gaalarii Aartii Raaheel keessatti argamanis, kan ergaawwan yaada sammuu gadi fagoon ittiin dabarfamaniidha. Abbaa gaalarichaa dabalatee, qaamooleen hojii artii isaanii achitti beeksifataniifi dargaggoonni fakkiisaanii gabaaf dhiyeefan, achitti hojiisaanii agarsiifatu.
Wayita gaalarichi hojii eegaluttis, hojichi kan duraan hinbaramne ta'usaatiifi bu'aa kan hinqabne waan ta'eefuu, namoonni akka waan eddoo bashanannaa yeroo isaanii itti dabarsaniitti fudhataa turaniiru. Amma garuu haalli sun hundi geedaramaa jiraachu dubbatti Raaheel.
Lafa ashaakiltii bal'aa keessatti hojiiwwan ogummaatiin kan bareechifamee jiddu galli ogummaa kun, namoonni achitti yeroo dabarfatanis bilisaan kitaaba dubbifatu. Tajaajila intarneetii bilisaan argatu. Akkasumas mishaaleen aadaa fi hojii harkaa acitti gurguramu. Waltajjiin ogubarruu torbaniis achitti qophaa'a.
Kana malees gaalarichi mana barnootaa oggumaa ta'uun tajaajilaa jira. Kanaafu daa'immaniifi dargaggooni achitti leenjii gannaa gagabaaboo argatu.
"Gaalariin kun anaaf invasitimantii kiyyaa. Innis lafa itti namoonni sadarkaa yaada isaan itti ijaarataniifi dandeettii dubbisuufi barreessuu isaanii itti cimsatan ta'aa dhufeera. Kanaafuu ogummaan invasimantii jijjirama ilaalchaa ittiin fuduuf gargaaruudha,'' jetti Raaheel.
Qormaatawwan hedduu keessa akka dabarte kan dubbattu raaheen, ''ilaalchii dogogoraan ogbaruuf ture amma geedarameera,'' jetti.
Gaalariin bu'aa maalii buusee?
Jiddu gala kanattis Sanbata yeroo hundaa waltajii ogbarruu ni qophaa'a. Yaadniwwan walaloo fi asoosama gagabaabduudhaa dhiyaatan keessatti eeramaniin ka'anis mata duree marii namoota hedduu ta'aa dhufuu isaanii namoonni irratti qooda fudhatan tokko tokko ni dubbatu.
galariin artii kunis hojiiwwan waggoota sadan darba keessa waltajicha irratti dhiyaatan haala kitaaba tokkotiin maxansiisameera. Kitaaba kana keessattis barreesitoonni 40 fi fakkii kaaftoonni 20 qooda fudhataniiru.
Warreen fakkii kaasan keessa tokko kan taatee Miniyaa, waltajjiin kun kan dubartoonni irratti hirmaataniif dandeetti isaanii ittinii cimsatan akka ta'e dubbatti.
''itti fufiinsaanis ogummaan fakkii kaasuu akka guddatuun barbaada. Hundi keenya walgargaaruun gaalarii biraa akka arganusi nan hawwa,'' jetti Miniyaan.
Waltajjii guyyaa Sanbataa qophaa'u irrattis, matadureewwan aadaa irratti qophii dhiyeessuun kan beekamu dagaggoo Asigidoom Tawalda gama isaatiin, erga jiddu galli kun saaqameen booda namoonni hedduun hojiiwwan ogummaa isaanii fiduu akka jalqaban dbbata.
''Hojiiwwan rakkoolee hawaasummaa ilaalatan ija jabuumaan ni dhiyaatu ture. Kanneen waa'ee aadaa, fakkii fi kan biroo dhiyeessuun namoonni akka walitti dhiheenya uummatan taasiseera,'' jedha.
Image copyright Rahel Art Gallery
Goodayyaa suuraa Raaheel Biluusti
Shamrree damee hedduu kan taate Raaheel
Shamarreen tunis ogummaawwan akka huffanaa hodhuu fi dizaayinaa, maandisummaa, Artitekchariifi pilaanii magaalaa dameewwan oggumaa sadarkaa digriin baratteedha.
Shamarree Raaheel wayita waggaa saddeeti jirtu ogummaa dizaayinii kana kan eegalte yoo ta'u, ogummaa amma hojachaa jirtu kanaaf leenjii baatii sadii Keeniyaatti karaa sagantaa 'Young African leadership Intiative' jedhamuun leenjii argatte jirti. Kana maleess PirojektiiObaamaa Maandeelaatti miseensa.
Isheenis pirojaktiiwwan dubartooti ofi akka danda'aniif deegarsa taasisuu hojiirra olchuun, omishawwan suphee maashinaan hinhojatamne omishuun akka dhiyeesan taasisuun walitti hidhiinsa gabaa irratti hojachaa jirti.
itti fufiinsaanis hojii eegaltee guddisuun, hojiiwwa harkaa akka babalataniifi lafa bal'aa irratti jiduu gala waltajjiin muziqaa itti qophaa'u, lafa magariisa ta'e kan qabu, man kusaa kitaabaa, galma tiyaatiraa fi kan biraa kan gutatee ijaaru irratti argamti.